Ezolimo zibe wumpheme wokuphephela kwabebengawutholi umsebenzi. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
ONksz uSiphindile noSimamele Sibiya basoLundi, eNyakatho yeKwaZulu-Natali, basungule iMaliyeza, etshala amaveji eLouwsburg, eVryheid, KwaZulu-Natali. Umngani wabo uNksz uNandisa Mpanza waseMacambini, eMandeni, ubafice ngendlela. IMaliyeza ikhiqiza iklabishi, ubhontshisi, i-butternut notamatisi.
UNksz uMpanza echaza ngokusunguleka kweMaliyeza ekhiqiza isivuno epulazini elingamahekthare awu-40 kodwa abasebenzisa awu-15, uthi wukuswela umsebenzi okwenze bagcina bengena kwezolimo. Umhlaba bawuthola emphakathini waseVryheid.
Yena noSiphindile bane-Degree in Agriculture yase-University of KwaZulu-Natal naseCedara College, kuthi uSimamele yena une-BSC in Hydrology yase-University of Zululand.
Isivuno seklabishi leMaliyeza
“IMaliyeza bayisungule ngisasebenza eChina ngo-2019, nokuthe besanda kuyiqala ngabuya kuleli zwe, savumelana ngokuthi ngibajoyine ebhizinisini. Sahlanganisa nemali esasiyibekile ukuze liqale,” kulanda yena.
Uthi: “Ukuqala ibhizinisi akulula, ikakhulukazi ngoba imboni yezolimo inezinselelo eziningi. Nakithina kube nzima sisaqala singenayo imali eyanele konke okudingekayo, singazitholi nezisebenzi esingazethemba. Saba nenkinga yokuswela amakhasimende, konakala kakhulu sekubhoka iCOVID-19.”
Okwamanje eMaliyeza banezisebenzi eziwu-15 eziyitoho ezisebenza noSiphindile ogxile epulazini, kuthi uSimamele noNandisa bona banemisebenzi eseceleni esiza ukuxhasa ibhizinisi lezolimo.
“Ukusebenza ngokubambisana kusisize kakhulu kangangokuthi ezikhathini lapho omunye efikelwa wumcabango wokuphonsa ithawula, abanye (bakhona) ukumkhuthaza nokumeseka kuyiwe phambili. Akukho okuza kalula kodwa (kudinga) ukuthi sisebenze kanzima ukuze siphumelele,” kuchaza uNksz uMpanza.
Uphonsele uhulumeni inselelo yokuthi uqhubeke nokwenza imizamo yokufukula abalimi abasafufusa.
Uthe: “Ngokwami uhulumeni awukenzi okwanele ukusiza abalimi abasaqala embonini, engikholwa wukuthi uma ungandisa izinhlelo eziqondene nathi nezingezukudinga imicikilisho eminingi, singasizakalala kakhulu.”
Isivuno sikatamatisi seMaliyeza
Uthi bafisa ukuthi iMaliyeza igcine isikhiqizela izitolo ezinkulu namanye amazwe, iphinde ifeze igama layo ngokubenzela imali.
Facebook: Maliyeza/Nandisa Mpanza/Siphindile Phindi/Simamele Sibiya